Tag: fikarohana | Martech Zone
Methodify dia sehatry ny fikarohana tsena mandeha ho azy ary iray amin'ireo vitsy eran'izao tontolo izao izay novolavolaina manokana ho fanamorana ny fizotran'ny fikarohana manontolo. Ny sehatra dia manamora kokoa sy haingana kokoa ny fidiran'ny orinasa amin'ny hevi-dehibe momba ny mpanjifa isaky ny dingana amin'ny fampandrosoana ny vokatra sy ny fizotry ny varotra hahafahana mandray fanapahan-kevitra tsara kokoa. Raha raisina dingana iray lavitra kokoa, dia namboarina i Customify mba ho azo namboarina, manome ny hevitry ny mpanjifa ny karazan-javatra rehetra
Na dia betsaka aza ireo orinasa madinidinika mandao ny Facebook, dia manitikitika ny saiko foana rehefa mahita zavatra tsy ampoizina mitranga ao ho an'ny mpanjifa. Minoa ahy, raha tsy mandoa vola izy ireo mba hampiroboroboana lahatsoratra… Tsy dia avo loatra ny zavatra antenaiko. Ny iray amin'ireo mpanjifako dia orinasam-panompoana tantanin'ny fianakaviana izay manompo eran'ny fanjakana Indiana. 47 taona teto izy ireo ary manana laza mahatalanjona. Vao tsy ela akory izay dia nisy tafio-drivotra havandra nandona tanàna iray teo akaikin'ny Indianapolis, antsoina hoe Greensburg.
Mihevitra ny tenako ho minimalista amin'ny marketing amin'ny atiny aho. Tsy tiako ny tetiandro sarotra, ny fandaharam-potoana ary ny fitaovana fanaovana drafitra — amiko, izy ireo dia mahatonga ny fizotrany ho sarotra kokoa noho ny tokony ho izy. Tsy lazaina intsony fa ataon'izy ireo henjana ny mpivarotra atiny. Raha mampiasa fitaovana enti-mandamina tetiandro 6-volana ianao — izay andoavan'ny orinasa anao dia mahatsapa ho adidy ianao hifikitra amin'ny antsipiriany rehetra amin'izany drafitra izany. Na izany aza, ny mpivarotra atiny tsara indrindra dia mailaka, vonona hanova ny atiny ho toy ny fandaharam-potoana
Alakamisy, Aogositra 24, 2017 Alakamisy 25 martsa 2021 Douglas Karr
Ao anatin'ny paikady fitadiavana ankapobeny, dia nifantoka tamin'ny atiny farany sy matetika ary mifandraika amin'izany ny orinasa izay mety hampiakatra ny laharam-pahamehana sy ny fiovam-po. Ny fanoratana lahatsoratra fohy maro dia iray amin'ireo torohevitra nafoinay tato anatin'ny taona vitsivitsy. Misy antony vitsivitsy mahatonga: ny atiny lalina - ny milina fikarohana dia laharam-pahamehana amin'ny alàlan'ny lazan'ny atiny, vanim-potoana. Miorina amin'ny kalitao ny lazany, ka tsy a
Alahady, Jona 25, 2017 Alatsinainy, 26 Jona, 2017 Douglas Karr
Betsaka ny lahatsoratra efa nivoaka momba ny mampihoron-koditra ny ankamaroan'ny atiny. Ary misy lahatsoratra an-tapitrisany momba ny fomba fanoratana atiny lehibe. Na izany aza, tsy mino aho na ny karazana lahatsoratra na izany aza tena manampy. Mino aho fa ny fototry ny atiny tsy mahomby izay tsy mahomby dia singa iray fotsiny - tsy fikarohana ratsy. Ny fikarohana ratsy ny lohahevitra, ny mpijery, ny tanjona, ny fifaninanana, sns. Dia miteraka atiny mahatsiravina izay tsy manana ireo singa ilaina amin'ny